Blog — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ao amin'ny boky vaovao Trip, Mitsangàna, dia nanandrana ny hanoratra momba ny zavatra tsy mifanaraka amin'ity taranaka ity. Jereo raha mandeha amin'ny alalan'ny sasany ny toko ary manome Nisy nanakorontana mangingina tampon'isan'ny amin'ny votoatiny.
"Trip ny nanoratra boky izay mihevitra aho fa ny olona rehetra dia mila tanora mba hamaky. Ny fitiavany an'i Jesosy sy ity taranaka ity dia tonga amin'ny alalan'ny mafy sy mazava ny teny rehetra pejy. Tsy andriko ny hahita ny fiantraikan'ny manana ity hafatra ity amin'ny taranaka izany noana ny tanjona. "- Lecrae, Grammy hanomezako- nahazo mpanakanto @lecrae "Mitsangàna dia mahatalanjona boky hoe nambabo ny fon'ny ny kolontsaina. Raha vao Noraisiko ilay izy azoko Izy Io. Trip fanamby anao mba ho TENA, ary mampiseho aminao ny fomba hahafahanao hiaina ny ainy ho olon-dehibe tanora eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Lehibe Vakio. "- Sam Acho, NFL linebacker, @thesamacho maha-olona "Trip dia nanoratra boky tiako Efa namaky aho fony aho mbola kely. ny fitiavany, fahendrena, sy maniry ny fanamby ny tanora dia ny fanekena ho amin'ny asa ny manao amin'ny alalan'ny Trip sy ny asa dia atao amin'ny alalan'ny antsika rehetra. "- Kirk Franklin, Grammy loka- nahazo sy multi-peo platinina mpanakanto @kirkfranklin "Izaho tia namaky Mitsangàna. Imbetsaka ao amin'ity boky ity ny tenako hitako medi- tating ny pejy rehefa mamaky azy. Nampahery ahy, ara-tsindrimandry, sy fanamby an-dalana rehetra. Ny kolontsaina manantena antsika mba handany fotoana fa Andriamanitra ...
Trip ny boky vaovao, Mitsangàna, dia avy izao! Vakio ny sasin-teny John Piper ny ny boky etsy ambany. Afaka mialoha mba ny boky sy mianatra bebe kokoa ao amin'ny Risebook.tv Ny iray amin'ireo zavatra lehibe momba ny Trip Tiako Lee sy ny boky, Mitsangàna, dia ny interplay ny fanajana sy ny dehibe. Ny tanjona amin'ny dehibe amin'ny Amerikana ny kolontsaina mahazatra. Cool dia ubiquitous. Araka ny Mack hoy Stiles, Ny ankamaroan'ny Kristianina eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy hatahotra ny natsangana totohondry; Amerikana matahotra ny natsangana eyebrow. Izany dia midika hoe isika dia tsy mangatsiaka. tsy mifandraika. Fa ny tanjona amin'ny fanajana dia tsy fahita firy. Fanehoana Fanajana mahatsapa antitra. Izany mahatsapa unexciting. Izany dia midika hoe tsy hampangatsiaka. Fa ny olon-drehetra no mahalala, lalina, fa rehefa mandeha fanehoana fanajana, fiainana manontolo ny olombelona dia lasa fampisehoana isan-karazany. manify. glib. marivo. Plastic. foana. Amin'ny farany, dikany. Izahay dia natao ho an'ny hafa. "Cool dia mora niova hevitra, ary afaka ny tsy ho velona ho azy ", izany hoe teny Trip Lee. Izay indrindra. Miezaka ny hiaina fotsiny mba ho mangatsiaka, fotsiny mba ho manan-danja, dia ambany. Ary ny feon'ny Trip Lee mitaraina, Mitsangàna! Misy be dia be intsony ny hahita, hahafantatra, mitia, mankafy. Misy zava-misy izay dia lehibe izy ireo tsy azo nihena ho voly. Ny teny hoe "mahafinaritra" "fipoahana" "baolina" "antoko" adaladala feo ...
Hey ry zalahy! Ny boky Mitsangàna dia fanafahana Janoary 27 (amin'ny herinandro ambony!) ary mila ny fanampianao aho. Izahay mitady olona izay afaka manampy ho anisan'ny Street Team sy manampy antsika hampiely ny teny momba ny boky an-tserasera sy teo amin'ny haino aman-jery sosialy. Azonao atao ny mijery bebe kokoa momba ilay boky ao amin'ny Sokajy://RiseBook.tv Ny vavaka ataoko dia ny hoe Andriamanitra dia handray ity boky ity ary mampiasa ny hafatra mba hanohitra ny taranaka mba hitsangana ka ho velona. Ary afaka manampy antsika nampiely izany hafatra amin'ny alalan'ny sonia ka ho ampahany amin'ny Street Team ho an'ny boky. Toy izao ny fomba izany dia asa ... 1 - Ampiharo HERE. Aoka isika hahafantatra bebe kokoa ny momba anao, Nahoana no te-ho anisan'ny ekipa, ary hizara anareo haino aman-jery sosialy sy ny aterineto rohy amintsika. Ny mpitory dia hamerina hijery ny fampiharana ary raha voafidy ... 2 - Vakio ny mialoha ny boky. Dia hampandehaniko ho atỳ aminao ny PDF dika mitovy amin'ny boky mba hamaky. 3 - Join ny tsy miankina Facebook Group. Ianao nahazo fanasana mba hanatevin-daharana ny vondrona Facebook manokana avy ny mpitory. Ery, ianao hahazo iray taonina afa-po be ny hizara amin'ny namanao. Misy...
I nilalao baskety varsity amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Izany no fanambarana marina tanteraka (raha tsy manery ahy ny mamaritra ny teny hoe milalao). I nanatrika kely sekoly tsy miankina, ary raha toa ka misy ambony ianao nahazo ny toerana eo amin'ny varsity ekipa. Tiako ny lalao basket, fa be aho mijery azy io tsara kokoa amin'ny noho ny milalao azy io. Afaka miantso an'i Egypta mpilalao sy mivazavaza "mitsangàna!"Ao amin'ny mpitsara rehetra-kintana fahaiza-manao. Fa izany hatrany araka mandeha. Ny sekoly nanana hafahafa io fitsipika momba ny tena manao fanatanjahan-tena mba diplaoma, anefa, Dia efa voatery hifanaraka ka hanantonana ny lohany tamin'ny henatra izy isaky ny zoma alina. Ny fitoeran-tavin feno dia foana ny lalao an-trano. Faly ray aman-dreny sy mpianatra-maro ireo namana avy mine- naneho niakatra mba hanohana ny ekipa. Mampalahelo fa, dia mety atao toy betsaka ny fahasamihafana eo amin'ny lalao toy ny nataoko. Tiako jerena any an-bleachers ombieny ombieny, manontany tena ny zavatra rehetra ny olona mieritreritra, indrindra fa ny raiko. Mihevitra aho fa nahatsapa fa samy isika dia fotsiny mba hijery, fa nitranga ny manana toerana tsara kokoa. Ny hany fotoana no tena nanao azy tao amin'ny tany dia tonga tamin'ny ...
Aho dia dimy ambin'ny folo taona, ary ny fiainako dia satria nitodika ao anatin'ny avy. Ny anarako sy ny fahitana tsy niova, fa ny zavatra hafa rehetra ny momba tamiko dia nanana. Aho olona iray hafa tanteraka noho izaho efa herintaona na roa alohan'ny. Tsy hoe toy ny olona mandeha any amin'ny oniversite sy ny hamorona indray ny solon-tena amin'ny vaovao sy ny olo-; Aho hoe zavatra lehibe efa tamin'ny tao anatiko. Efa lasa Kristianina. Tsapako vaovao. Tsapako velona. Nahatsapa izany tsara fa tsy maintsy hanambara izany ny olona izay te hihaino, indrindra fa ny namana sy ny fianakaviana akaiky indrindra. Ny olona rehetra dia namaly tamin'ny fomba hafa ny fiovana ato anatiko-ny sasany amim-pifaliana, ny hafa amin'ny fanoherana, fa resaka foana iray niavaka ho ahy. Aho niresaka tamin'ny lehilahy zokiolona izay hajaina indrindra, Faly be ny manazava ny lalao drafitra ho an'ny hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'ny fomba fiainako, manokana ny firaisana ara-nofo ny fahadiovana. Niezaka ny ho tony momba izany, saingy sarotra ny mihazona hatrany ny fientanentanana eo amin'ny. Dia tahaka ny teny amin'ny lelako niantoraka amin'ny iray voajanahary haingana, I nahazo ny heviny fa tsy ho faly tahaka aho. Izy dia miezaka ny hihaino amim-pahanginana, fa ny endrika talohan'ny teny Namaly ...
Ireto ny tononkira rehetra noho ny fahadimy Trip Studio Album Mitsangàna. Tsindrio ny hira lohateny mba hahita ny tononkira isaky ny lalana. Ankafizo ary hizara ny namana! 1. Mitsangàna 2. Lights On 3. Shweet 4. Manolo Ft. Lecrae 5. Tsy fantatrao 6. Rehetra mitsangana (fanelanelanana) 7. Rehetra mitsangana 8. Beautiful Fiainana 2 (mine) 9. reraka Ft. Andy Mineo 10. zava-baovao 11. Lazarosy Ft. This'l 12. Ny haavon'ny rehetra My Love. Natalie Lauren 13. Tapitra aho 14. Sweet Ft Victory. Dmitri McDowell sy Lea Smith
hook: (Dmitri) Mahatsapa tsilo izay ny satro-boninahitra dia ho osa aho fa velona aho avy amin'ny vovoka mandra-maraina Eny tafavoaka velona aho, izaho nahazo Sweet Fandresena Tsy misy afaka maka izany amiko Sweet nahazo fandresena I Cause, mamy fandresena Eny Verse 1: Hitanao aho vahoaka mikotringa , Fantatro fa hahita ahy vahoaka mikotringa Tsy afaka miteny amin'ny CD ireo, fa ny Rahalahy lohalika aho lalina ao aho mandehandeha any amin'ny ny fahalemeko, nanao ahy miankina ho mandainga aho amin'ny alalan'ny ny nify hoe tsy sosotra izany dia tahaka ahy manoratra izany aho andalana akaiky ny ranomasony ny vatana dia tsy miasa tsara nandritra ny fito taona Koa manina ahy fa "hitandrina ny saoka ka miezaka mitsiky "Bruh aho enina amby roa-polo, I tokony hahatsapa tsara kokoa amin'ny iray kilaometatra ny tantara nifanesy Tandremo ny lalàna rehetra sy ny mahafatifaty teny nalaina aho handeha eo clichés fanantenana ho an'ny marina, loatra izy Hook dope Post Hook: Bera ho ny Mpanjaka, tehaka ho tsara ny valin-drihana Feeling isika gon 'mba hanao izany hatramin'ny farany Sweet fandresena mandre ahy ianao, holla raha mahatsiaro ahy mbola mihazakazaka isika na dia vahoaka mikotringa Sweet fandresena Cause mandresy isika, Eny fantatrao no mandresy isika Na dia winded isika ...
Track 13: Tapitra aho
Verse 1: Tsy zavatra an-tsaiko ianao nahazo indray mipi-maso? Soapbox swag, Vao tonga teo amboniny no nitoerako tany ireo gadra ary reraka aho izany (Car tabataba) Fantatro fa hihaino ireo kodiarana nisafo Feon'inona nidina ny lalana, gotta afa-maina I tetika aho hamonjy, Mieritreritra aho fa izao ny andro ', izaho no teo amin'ny fanandevozana ny marina lainga Nanandrana hanafaka ny tenako, nefa tsy mahay Get en avo, mahazo en avo, mahazo en avo Novacane ao amin'ny tenako, tsy izaho dia tsy mahatsiaro lainga Milaza izy ireo fa masira aho ary afaka mitsikera aho fa mivavaka ho namono, Tsy afaka hiandry ny fanjavonan'ireo Alohan'ny misento, ka lazao olona intsony aho miresaka aho bout ny resy i Losifera, fantatrao fa ratsy Fantatro anareo dia tsy nametraka ny handrava an-telefaonina Mety ve raha misaraka amin'ny hira? hook: I hihaino izay nanao hoe:, fa tsy mino anao 'Cause anao ho mandainga fotsiny, ary tsy mila anao aho Tompo nahazo vaovao, Fantatro fa tsy hahita anareo nefa mahita tsara alalanao, ka dia gotta handao anao (Avereno 2x) Verse 2: Impiry no gotta Lazao ...
Track 12: Rehetra My Love
Intro: (Natalie) Hitako ianareo no tianao mijery ny zavatra hitanao? Mpitovo aho? tsara, sorta kinda Angamba Inona no anananao ao an-tsaina? Ny tavanao toa mahazatra efa hitako ny fotoana sy afaka hiaro anao aho anio alina orinasa gotta taminareo dia tsy milaza tsy misy hafa tsy tsy misy olona manodidina nijery Eny fotsiny ny teny hoe ka nahazo azy Right eto, amin'izao fotoana izao Verse 1: Jay dia manirery Ary ny mitady ny fitiavana eo amin'ny lehilahy iray ny harato manana ilain'ny, izay miandry? Nitsirika izy rehetra, ny pejy Ary rehefa nahita azy ny olona dia very ny fofonainy Cause dia raiki-pitia izy, rehefa nihaona izy ireo nikapoka mafy ny fony izy kinda fahazavana nampahantraina, maso toy ny dia tia azy ireo tsy hiady izy ireo no fihetseham-po raha namely Anao izany mafy izany lavitra, ka dia ny taminy anaty aterineto Amin'ny andro rehetra izay ny any am-piasana, fa ny zazavavy ity ny saina Amin'ny andro rehetra izay tsy afaka miandry ny mahita azy, Natao izy ireo endri-javatra banging Ary nony niara-izy dia tsy mampaninona gotta karama amin'ny Visa ny homies nampitandrina azy "miadana fa tsy afaka namita ny vehivavy anao" Fa ny ao amin'ny lalao ny fitiavana dia tsy ...
Verse 1: Boy haingana nankatỳ aho ny fasana maraina tsara no matory aho fa ela loatra aho miresaka yawning olona rehetra nitady hahita ahy, Toy ny tsy finoana ny teny izay nataony miaina? Enina izy tongony Boy lalina izay nanao hoe:? Aingao ambony manakombona ny vava ny maty tsy afaka holla, izay miresaka bout? 'Asaovy indray mandeha amin'ny alalan'ny varavarana izy fa tsy mandeha nivoaka Fa aoka handray anareo indray amin'ny andro ho ny vatam-paty ankehitriny Ooh Fantatro fa fanorohana azy io eny amin'ny habakabaka, izaho efa ao am-pasana fa ela loatra ny olona Mianiana aho nitomany ampy, filazana manjo no voasoratra ny tavako hatsatra, tsy afaka milaza ny zazalahy momba ny ho nitsangan-ko velona Close ny vatam-paty, hiantso ny mpitoriteny, izy ka lasa izany ny tsy misy olona tsy hahatratra azy, hoe ela fa mihazona ny, eo anatrehanao mitaraina sy lany olona reko avy, ka nanao hoe zavatra mamon, "niseho" Pre-Hook: Haingana nankatỳ niakatra avy ao am-pasana, tsara maraina aho no matory fa ela loatra aho, ka naleviny ahy yawning mainty palitao, mainty aho tie velona ary nifoha mijery hanidina Koa manomboka izao Hook: Manomboka izao dia afaka miantso ahy Lazarosy Manomboka izao dia afaka miantso ahy Lazarosy avy ...
Intro / santionany: Hold up, haingainareo ambony Aoka aho hahazo iray hafa (Avereno 4X) Verse: Ankizilahy fantatrao no nahazo azy ireo ny J, Hanozongozona azy ireo ny tongotro nakarina tao amin'ny firohotana, ny efi-tranonao Tsy feno Fantatrao nahazo azy ireo aho ary 5 ny nahazo azy ireo fotsiny aho ny 12 izy kosa dia fantatrareo fa 1 ny tena te eo amidy kokoa àry ny mpivady kitika farany tao amin'ny tranonkala, mandra aho vao nahatsapa tsara Bruh I gotta hitandrina ny sneaker lalao mafy nahazo azy ireo, raha ny rehetra homie izay tsy tiako izao ny zavatra rehetra te-ho tahaka ahy fa tsy Mike ny fiankinan-doha dia tsy ny vehivavy na ny booze Sneakerheads tsy fantatra anarana, Mangidihidy aho ho an'ny sasany kiraro Ataovy amin'ny karatra, Aho dia tsy nahazo na inona na inona ho very Indraindray Manontany tena aho hoe inona fa Izaho te-mba hanaporofoana Cause wan't zava-baovao aho Izay nahazo dia tsy mihevitra aho no nahazo ny sasany kinda gripa Cause Andevozin'ny aho fa nahazo izany vaovao ahy tahaka ny outro / santionany: Yeah dia nahazo ahy tahaka ny Aingao ambony, haingainareo ambony Aoka aho hahazo iray hafa (Avereno 4X)
Track 9: reraka
Verse 1: Niditra aho amin'izao fotoana izao ity ihany no nitifitra ny mety tapitra ny fiainako amin'izao andro izao ny foko Eny nijanona raha mivoaka aho anio alina mivoaka eo an-tampony rehetra homeko azy dia tsy ity fiainana ity no nahazo Yessir rehetra izao miandry ny minitra bruh I jereo y'all hanozongozona, NW amin'ny avo ny tananao miandry izay gadona mba hanala, 808'S amin'ny standby Rehefa miaina aho bangers lazaiko fanambarana izay mijanona eto anilan'ny gon tany mihorohoro rehefa gadona indray mitete, Trarantitra ianao, aoka aho fihotsahan'ny tany intsony ny leash tsapako izany, Tsapako izany, Aho mahatsapa tsara loatra aho, toy ny biby toy ny rajako, izay no tena tao an-Hood Ary araka izany no mitranga aho sy ho sasatra aho rehefa lasa aho Mitsangàna ka kosohy no nolazain'i aho amin'ny Bruh izany no mahatonga nanoratra ny hira Anio hariva aho handeha eny toy ny androm-piainany fotsiny maharitra mandritra ny alina Raha tsy mifoha amin'ny maraina, bruh aho maninona hanipy gon ho fampitandremana ho amin'ny rivotra Aoka handeha izahay bout mba hiditra No lasa miadana kokoa, gon isika hahazo No lasa miadana kokoa, fantatsika Hirehareha Pre-hook: Anio hariva aho rehetra vivery ny manaraka dia ho velona tahaka ny fiainako ny ...
Track 8: Beautiful Fiainana 2 (mine)
Intro: Oh, tiako ianao, Yeah Like tsy misy hafa, Eny Rehefa mahita anao mitsiky isehoanareo tahaka ny vanin-taona mafana, Eny Verse 1: Fantatrareo fa fihetseham-po, rehefa tsy azy ireo ny teny Sarotra ny manazava izay te-hilaza To ny Mini ahy, kely ny olona tsy miresaka zaza lahateny, Tsy fantatro izay ho hoe: Fa ny mozika ny sofiko aza Boom bap ny dada rehefa akaiky aza aho Neny hampahatsiaro anareo ao aminy polos sy eroa skinnies olioly bibidia, ianao noho ny fanaovana dokambarotra ho Lire fa na dia samy hafa firenena ankizy nahazo swag azy Mitady tahaka ny Neny sy ny dadako azy mahitsy avy tany am-bohoka ianao dia tena vaovao nitomany mafy aho ambara dia tsy manana ranomaso sisa Nanomboka teo mitandrina tsiky nihohoka Mitolona sy ny dihy, ny fivoaky ny any amin'ny tany Jereo Fantatro fa nahazo ny anarako Fa tiako manao ny velona noho ny lazany, Tiako ianao Hook: Oh, Tiako ianao tsy toy ny hafa aho rehefa mahita anao mitsiky isehoanareo tahaka ny vanin-taona mafana ny fahitana tsy afaka ny ho mazava kokoa tsy misy tsy Cause tsara tarehy ianao, dia tsy mahagaga raha tiako ianao Tsy azoko ...
Track 7: Rehetra mitsangana
Sample: Raha mitsangana isika rehetra, ô ô Eny Eny (Avereno) Verse 1: Fantatro fa tsy mendrika ny hikasika ny Rahalahy Mika asa tanana anefa izany dia zavatra aho hiady ho aho ao amin'ny laboratoara amin'ny penina ity sy ny pad satria fantatro mba mahavita farany, izay tsy tena antony thoughLet manoratra ny handeha indray amin'ny andro ho '04 aho nihaona 116, haingana aho handroso tao an-tsambo Fast efa-taona, isika amin'ny fitetezam-paritra Ary tsy fantatra hoe inona no nananany miandry eto Fa ankehitriny isika folo taona tatỳ aoriana, Nahazo fampindramam Bonds lehibe kokoa nahazo akaiky, Plus izany intsony isika hoe mankahala fotsiny izany ho koba, fa tsy handrava antsika 'no lazain'i Jehovah Tompo manompo amin ny fizotran'ny Izy no Tena tsara fanahy Ary raha manontany ahy hoe nahoana no manao izany Lazaiko azy ireo fa ny mozika ny hetsika Eny miteny aho noho ny unashamed tantsambo izay tsy mikasika ny sehatra ry zareo fa mandeha amin'ny Mitsangàna Pre-baovao Hook: Raha upThat-mitsangana izahay rehetra ho nofiko rehetra Tokony Mitsangàna, ka hanome ho eo ho an'ny mpanjaka O antony dia tsara Oh Eny, Eny ô Oh Eny,...
Intro / santionany: Andro vitsivitsy Mahatsapa tena akaiky andro Ary ny sasany toa hatreto Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka foana Ary tsy miverina foana, Oh Haleloia ho fiderana ambony indrindra aho anomezako azy ho anao amim-pifaliana ny androko rehetra manantena fotsiny aho fa ny fiainako rehetra no nampitain'i fa hoe ny teny rehetra, ooh Na dia eo aza ny ratsy amiko Jesosy, Oh i Jesosy, My Jesosy, izany no mahatonga tiako ianao ka Verse 1: Boy tsapako toy ny gliding aho nihazakazaka ho ny fifidianana azo antoka, Obama Biden (azoko?) Isan'andro aho fa fototr'izany homiciding famonoana ato anatiko, indraindray izany traumatizing (tsy izany?) Rahalahy izany fa tsy mahagaga raha mitondra ahy fifaliana izany rehefa mifikitra ny teniny aho mitaingina teny fikasana Mampanantena aho no manenina aho izany rehefa tsy mitoetra aho no hita aho, fa ao aminy aho mitovy dika: Miafina aho mahatsiaro ho toy Nahazo lavaka ao anatin'ny iray manipy alokaloka izy ireo, Faly be aho fa, izaho mahalala ny Zanaka mahatsapa ho toy ny manonofy aho miaraka amin'ny maso misokatra, ny saina mitsingevana Gliding amin'ny lanitra miakatra, rahona 9 izany ny ranomasina Lomano amin'izany sosona Ozone sosona Hey hahavonto aho nandrehitra anefa izy fa ny afo ny ambanin'ny aoriana aho dia tsy afaka ny fifohana sigara ...
hook: I Ataovy izany ho an anjara ny Got izay ammo mihidy sy mavesatra I tsy miresaka momba tsy burner handrehitra ny pejy, Hipoaka aho dia nahazo trano fialan-tsasatra any Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (Avereno 2x) Verse 1 (Trip): Miezaka ny milaza azy ireo ankizilahy aho, tsy handao ny fihinanam-bilon'ny irery, izaho foana amin'ny fiara iray ary nahazo roa samy hafa izy ireo ao an-trano isan-karazany, nefa tsy mety mankatò ny toy izany Double sisiny, avo roa heny barika, Bang Bang avy eto aho miatrika dragona, Aho dia tsy avy an-tsaiko izy ireo avy ny aiko, noho izany dia bout andro izany lainga Azy izy ireo mitady ny aiko, raha tsy mino ahy tsy miraharaha, Tsy miraharaha, Tsy afaka maka izany mora flipping aho ny pejy, Aho trigger-faly ny horonantsary sy ny habetsahan'ny Raha mikitika azy io, mikapoka ny sehatra namely Anao amin'ny fahamarinana, ny isaky ny andian-teny dia nanapaka ahy lalina aho antsitrika, Antsitrika tany aho mitaingina aho Rehefa nahazo izany afo afo, Velona indray aho hook Verse 2 (Lecrae): Manolo Manolo, Avy eto aho handeha paositra mihevitra ny mpiara-miombon'antoka no very izany, ny Mama loco mihevitra aho no hitandrina ny shooter akaiky aza, fantatrao fa tsara ...
hook: Get ireo tanana eny amin'ny habakabaka ho kely feony tao ny fitoeran-tavin raha misy Hirehareha amin'ny Godman raha sahy, ihany raha sahy fa Te ho shweet Ahoana raha rehefa mirehareha fa tsy 'bout ny akanjo sy ny Tags? Izany Te ho shweet Ahoana raha mirehareha rehefa bout fa izay no Voalohany sy ny Farany? Izany Te ho shweet Post Hook: Efa reko izy niresaka tahaka ireo lehilahy mafana Nisy olona natao azy ireo gassed ny, tamin'izany octane Jereo halako ny milaza azy ireo tsara kokoa izy ireo dia tsy hahazo elo Tsara, Andriamanitra manjaka Verse 1: Andao hiverina any amin'ny andro ho tara eighties D tanàna mihazona ahy midina, izany izay nanao ahy, rehefa miverina any aho, I Tsy Vaca-tra (sasatra) Mahatsiaro toy ny an-trano aho, mieritreritra ny hijanona, Aho dia tsy mijanona na dia efa Lone Ooh efa niteraka fanjakana kintana, hataoko ahoana manadino izany Fa tsy miseho niakatra avy amin'ny manga Tena manidina ny fomba raiki-pitia ahy, Aho dia tsy miresaka bout ny kiraro, tsimoka azoko be dia be ny olana fa mahitsy aho, izany shweet fantatro ny Andriamanitra dia hanipy azy any amin'ny farihy, Izany shweet Impiry no gotta lazaiko aminareo ...
Intro / santionany Oh Oh, ny fahazavana Tsy fantatsika izay handeha (Avereno) Verse 1: Jereo manodidina izany maizina rehetra, mainty rehetra ny zava-drehetra, toy ny lehilahy tapitrisa diaben'ny, nefa aho bout miresaka ny zava-drehetra ny fo Dark, Dark fanahy maizina ny saina manoratra maizina tsy fampindramam no Hataoko mahazo hazavana kely aza? Izany ve no zavatra azoko hiady ho? Hey jamba isika dia tsy fantatray amin'ny lalambe izahay fa handeha Mandehana haingana feno mialoha, manidina fa ambany fa tsy fantatra hoe inona no tonga teo amin'ny fivarotana, intsony nianjera ny okie doke Tsia, dia afaka manome antsika ny nahita zavatra izay mbola tsy nahita teo anatrehan'i 'mandra-mahazo ny fahazavana mamirapiratra, tsy fantatray izay handeha fa tsy misy Google Map ho an'ny fiainana, ary izany dia toy ny jiro tapaka Famantarana: isika manelatselatra, mandalo amin'ny sasany harena izany volamena Ho an'ny sasany nikela sy varahina, miezaka ny hahazo voninahitra izany nangalarina ary mijinja izay zavatra mamafy Hey izahay rehetra nahazo nofy, Ahy izao no nivavaka aho fa handrehitra ny jiro Ho sy hamirapiratra, ankizy jamba mahalala Anao izahay nahazo azy, Tompo fantatray no nahazo izany ihany no afaka hitondra antsika kokoa, ny mpanamory ianao azafady Jiro hook isika ...
hook: Androany no andro-mitsangana izahay rehetra ny vatofantsika ny lasa ka mijery ahy ho velona miaraka isika mijoro manohitra ny mirehitra lainga sy ny ankehitriny fa Izaho nahita ny elany aho vonona hanaraka Mitsangàna, -mitsangana izahay rehetra Oh Oh Oh Oh-mitsangana izahay rehetra Oh Oh Ankehitriny ny andro Mitsangàna Verse 1: Aingao ambony indray aho mba hirehareha amin'ny lalany ireo toy ny very saina aho amin'ny en, Mety aoriana tahamaina mics Tsy mampaninona an-tsaina ny zava-misy na oviana na oviana aho nandao natrehin'ireo aho Henoy ny tsara ianao dia tsy gotta manontany ahy indroa aho eto, Tonga eto aho mba hirehareha azy toy ny fantatra aho ry namana snore I'ma Raha handeha ho azy ny tsy misy Andriamanitra dia tsy Folklore, 'Mahatonga dia tena, dia tena Ary ny lohahevitra akaiky fantatro ny mpamorona, Izy no ambony noho ny mpanamory manidina ao rahona dia natao tamin'ny tanana nanoratra aho mba hilaza aminareo ity fiainana ity dia tselatra amin'ny lapoely no Ahoana no I'ma hisotro ronono rehefa mila cryer mba hilaza aminay mba mitsangana ka mijoroa? Jereo Bika mikasa ny Dude, fa ny fasana dia tsy ao an-tranonao ianao Cause efa ela loatra ny lalana ambanin'ny tany lalina enina amin'ny vato daty eo amin'ny rehetra hoy izy ireo,...
Coulda Izahay Me Lyrics
Produced by: Gawvi fanampiny Vocals amin'ny: J. Paul Sary An amin'ny: Alex Medina mifangaro sy voafehiny ny: Jacob "Biz" Morris Verse 1: Tsy misy olona tsy te-hihaino ny fanaintainana izany no nahatsapa aho, rehefa flipping aho amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ireo amin'ny twitter, Tsapako fa izay rehetra orana milaza izy ireo ahy handresy izany antitra fa zavatra tsy misy intsony anefa izay tsy ampanenoy marina rehefa mijery ao amin'ireo arabe Noho izany, rehefa mahatsapa tena tahaka izany coulda nisy ahy Hook: Misy olona mahay Lazaiko aminareo ny fomba fahatsapana aho amin'izao fotoana izao izy ireo Ah te-hahafantatra ny fomba fahatsapana tsara aho ankehitriny dia mahatsapa toy izany coulda nisy ahy no mahatsapa toy izany coulda efa ahy avokoa isika rehetra natao araka ny endrik'Andriamanitra fantatrao ny fiainantsika rehetra danja, Nopotehina ny fahitana dia mahatsapa fanaintainana isika antony teto izahay talohan'ny Iza no manan-tsiny Tsy fantatro anefa coulda nisy ahy no mahatsapa toy izany coulda nisy ahy Verse 2: Tsy fantatro Brown I Mike dia tsy fantatro Trayvon tsy fantatro Sean Bell Fa samy fantatro intsony izy ireo dia tsy fantatro I Oscar Grant na Tamir Rice tsy fantatro Eric Garner Fa samy fantatro izy ireo ny fiainana mendrika kokoa noho izy ...
Coulda Izahay Me
Ny foko mavesatra. Fantatro fa Andriamanitra dia tsara, ary Izy no amin'ny fanaraha-maso, fa ny fo mavesatra. Tamin'ny herinandro lasa taorian'ny zava-nitranga tao Ferguson (ary ny valinteny ho azy tao amin'ny haino aman-jery sosialy), Nahatsapa ny mavesatra mba hanoratra hira. Ny tanjona dia tsy hanaovana izay fanambarana lehibe na fanambarana, fa ny hanehoana ny fomba nahatonga ahy hahatsapa ny zava-drehetra. Noho izany dia nanomboka nanoratra, ary izao no nivoaka. Ny fihetseham-po izay nanako tao an-tsaiko dia: "Mety efa nisy aho." Tsy nanana lahatsoratra manontolo vonona ny fomba tokony mamaly ny Kristianina amin'ny fotoana toy izao, fa araka ny vaovao momba an'i Eric Garner omaly, Nanapa-kevitra ny hiandry sy lahatsoratra izay taty aoriana. Amin'izao fotoana izao, Fotsiny aho te-hilaza fa manana ny malahelo am-po. Tsy liana aho amin'ny adihevitra na hevitra dieny izao. Fotsiny aho te haneho ny fahalalahana hanisy ratsy ahy. Hanisy ratsy aho satria Eric Garner lahatsary dia nampivaloharika mijery. Rehefa mivady voalohany nijery azy io volana lasa izay, isika samy nitomany. Ny fiainana dia fanomezana tsara tarehy, ary izany mampieritreritra ny mijery fa ny fiainana hiala ny vatana olona - indrindra fa raha ny nalain'ireo lehilahy hafa. noheveriko, "Azo antoka fa ny olona dia tsy mahazo ...
My boky vaovao, Mitsangàna, mivoaka 27 Janoary! Ho hita na aiza na aiza boky amidy. Afaka mialoha izany mba hamangy ny boky ao amin'ny tranonkala Risebook.tv. Mivavaka aho ny Tompo dia hampiasa azy io mba hampaherezana ny taranaka mba hitsangana ka ho velona. Jereo ny tranofiara ambony ary vakio ny famaritana fohy ny boky eto ambany: Hoy i Society tanora dia fotoana tena mampamaky loha-teny, Hoy i Lee fa ny Trip Andriamanitra efa niantso ny rehetra mba hitsangana avy amin'ny torimaso, ambony ambany fanantenana, ary ho velona ho nitsangan-ko velona Mpanjaka. Izao tontolo izao dia milaza amintsika fa ny voalohany taona dia ho irresponsibly nahafinaritra fa tsy natokana ho manan-danja mikatsaka. Isika dia nilaza fa ny andraikitra sy ny fanoloran-tena ny enta-mavesatra mba hatao eny, raha mbola araka izay azo atao. Ary noho izany, ankamaroantsika mandany ny tanora ao amin'ny malahelo toe-torimaso-matory ao amin'ny fiainana isika mandra maintsy hifoha. Ny olana dia ny fiainana efa nanomboka. Izany dia midika hoe mitranga amin'izao fotoana izao. Ary Andriamanitra efa niantso anareo ho miaina izany. Ao amin'io boky mahery, Trip Lee milaza tonga ny fotoana mba hifoha sy ny RISE, mba hiaina ny fomba noforonina hiaina. Tanora na antitra, dia efa nantsoina mba hiaina ho Azy. Izao dia izao. Tanora hiatrika ny mpino ...
Nankafy ny zavakanto hita ianao noho ny farany Trip Album, Mitsangàna? Dia haka izany shweet temotra noho ny finday mba hahafahanao manana izany aminareo rehetra ny fotoana. Download iPhone Wallpaper
Inona no mpandresy mijery tahaka ny? Ve izy ireo lava na fohy? Mainty na fotsy? Mahery, na osa? Heveriko izany dia miankina amin'ny inona no holazaina "mpandresy." Ninonoanao aho tao an-tantara ny mpandresy iray ity volana lasa toy ny mamaky lava, fa hanintona filazalazana ny mombamomba ny Michael Jordana. Ny kaonty tsipiriany nampahatsiahy ahy hoe nahoana ny olona maro ny mieritreritra be momba ny mahery fo aminy mifanolotra fanompoam-pivavahana. Zavatra maro no azo lazaina momba "ny airness" fa tsy misy olona afaka milaza ve fa tsy misy mpandresy. Ve izy hijery toy ny mpandresy, fony izy tsy nahazo izay rehetra tompon-daka vava, anefa? Rehefa mamaky ny boky, dia toa mazava Efa hatramin'ny mbola kely fa ho tompon-daka. Na izay ny tena lalao ho toy ny siny kely ligy na ho toy ny zandriny varsity mpilalao basket; ny lycée Mitombo haingana be, na ny lalao handresy voatifitra nandritra ny taona freshman amin'ny UNC. Ny fotoana dia tonga ny toko momba ny championships ho Chicago Bull, tsy nisy tsy ampoizina. Nilaza ny mpanoratra ny tantara amin 'ny fomba izay mazava tsara: Jordana teraka ho mpandresy. Ary izay no fantatsika fa: tompon-daka enina nahazo vava, dimy MVPs, ary 14 Rehetra ...
A roa volana lasa izay dia nahagaga ny olona rehetra amin'ny alalan'ny nanambara ny raki-kira vaovao, "Mitsangàna." Tsy mahatakatra ny fomba sarotra izany dia ny mangina momba izany eo anatrehan'i ny marika, ary nandeha aho-bahoaka. Ny rakikira Efa ao ny asa ho an'ny mahery ny herintaona, ary tsy afaka miandry ny hilaza ny rehetra - indrindra fa ireo izay nitandrina mangataka rehefa nandatsaka zava-baovao. Ny valiny hatramin'izao no tena mampahery. Gaga aho fa olona mbola hanohana ahy na dia nisy aza aho somary nangina ny farany roa taona. Ny fitiavana sy fientanentanana dia nitombo ihany ny ahy. Tany am-boalohany Retirement Ny iray amin'ireo valinteny aho, dia tsy gaga ny ity iray ity: "Andraso, Hoy Izaho: Hianao nisotro ronono?"Izany no fanontaniana izay manaraka ahy manodidina toy ny aloka. Efa niresaka izany aho amin'ny dinidinika, bitsika, sy ny bilaogy Lahatsoratra, fa fantatro fa mbola mazava ny sasany. Aoka aho hanohy hiezaka ny hametraka ny firaketana an-tsoratra mahitsy: Tsy mbola misotro ronono. In 2012, Dia nanambara fa ho aho "hanitsaka miala amin'ny mozika." Eny, Fantatro fa toa fisotroan-dronono-Ish, fa minia tsy nampiasa izany teny. Foana aho izany fanahy iniana manjavozavo satria tsy 100% azo antoka ny zavatra mety mitovy. Efa haiko...
Mila fampahatsiahivana isan'andro fa efa natao naorina mba mirehareha? Izahay efa atambatra vitsivitsy ny wallpapers ho an'ny finday, takelaka, na ny biraonao. Misy safidy tsotra telo eto ambany ny mirehareha famantarana. Betsaka kokoa ny ho avy taty aoriana. Ankafizo! Download iPhone Wallpaper • Download iPad Wallpaper • Download Desktop Wallpaper Download iPhone Wallpaper • Download iPad Wallpaper • Download Desktop Wallpaper Download iPhone Wallpaper • Download iPad Wallpaper • Download Desktop Wallpaper
A Workout izay maharitra
Nandritra ny fiainako, Lasa aho amin'ny alalan'ny fizaran-taona rehefa Efa tena nandrisika miasa avy. Fony aho tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fotsiny aho te-ho Buff ampy hampiaiky volana ny zazavavy (I nahomby). Tamin'ny volana eo anoloan 'ny fampakaram-bady aho, niezaka ny hiasa eo an-tanako honeymoon tora-pasika tena. Tato ho ato, Fotsiny aho miezaka mba ho azo antoka ny ho velona lasa ny faharoapolo taonany. Ny antony efa niova nandritra ny taona maro, fa izay tsy niova no mora niova hevitra ireo antony ireo. Angamba ianao noho ny antony voajanahary hiasa an-Manaova feo fifaliana avy ny namako izay mamoaka pics sy lahatsary ny fampiofanana regimen isan'andro. Fa raha toa ahy ianao, ny antony manosika miakatra sy midina toy ny zanak'osy amin'ny trampoline. Ahoana raha ny vokatry ny asanao avy naharitra mandrakizay, anefa? Ve ianao hazoto kokoa? Off Pays asa mafy nandritra ny Lalao Olympika Ririnina tamin'ny volana lasa aho dia talanjona toy ny tselatra nijery haingana sy highflying bobsledders snowboarders. Gaga aho araka ny fanatanjahan-tena tsara indrindra, fa mainka aho gaga rehefa nieritreritra mikasika ny famaizana fiofanana tsy maintsy efa mba ahatongavana any. Rehefa tapitra ny tsirairay ny zava-nitranga, rehefa nandresy atleta nitsangana teo amin'ny mpandresy ny ...
Music no ampahany lehibe amin'ny fiainako izany foana aho mieritreritra hoe ahoana no hampiasa azy io tsara indrindra. Sarotra ho ahy ny mankafy zavakanto tsy fandinihana, nandray an-tsoratra, ary fametrahana fanontaniana. Beyoncé manana ny tsara ny firenentsika amin'izao fotoana izao, ary izy no mazava ho azy fa iray amin'ireo malala indrindra Pop kintana. Ny voalohany ramatoa Nilaza mihitsy aza izy raha mety ho olon-kafa, izy Te te ho Beyoncé. Beyoncé dia malaza kokoa noho ny hatramin'izay izy, ka tsy afaka miala ao amin'ny TV, na mahazo an-tserasera tsy nahita zavatra momba ny, avy amin'ny famerenana azy ny sary rakikira vaovao azy mandeha eny amin'ny arabe sy ny vavy. Mahafinaritra ahy noho ny talenta sy ny aingam-panahy ny fiara, fa gaga koa aho ny zavatra hitako. Beyoncé ary hataoko manan-teny kely iombonana. Izahay roa avy any Texas, ary betsaka ny fianakaviana tao Houston. Izahay mpanakanto roa izay efa nisaorana manodidina ny isan'ny irery ihany Albums (na dia kely fotsiny fantatra bebe kokoa noho ny fitiavany Ahy). ary Farany, izahay samy mpanota mila ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ao an-tsaina, raha nanana fahafahana mba hitsena azy ireo ny sasany amin'ireo fanontaniana mety manontany aho, ny sasany ...
Tiako ny miresaka momba ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika, na dia rehefa misy olona tsy manaiky amiko momba izany. Resadresaka dia afaka mahazo ny tena henjana aza-tena haingana indrindra rehefa miresaka momba ny olana mampiady hevitra. Tena mahafinaritra na oviana na oviana ny hilaza ny olona iray fa ny hevitrao ry zareo diso. Noho izany dia miezaka ny mitandrina amin'ny teniko, ary manondro fotsiny ny izay lazain'Andriamanitra, fa tsy ny heviny manokana. Toy ny clockwork, anefa, amin'ny fotoana iray mandritra ny resaka, dia Ho hesoriko ny trompetra karatra: "Fa tsy ny Baiboly milaza koa tsy hitsara? Ianao conveniently dia nifalihavanja noho izany andininy, huh?"Tena tsy ho levona mandrakizay. ao amin'ny Matio 7 hoy i Jesosy, "Aza mitsara, na ianareo koa dia hotsaraina. "Na dia ireo antsika izay mbola tsy namaky ny Baiboly, dia afaka mitanisa ity faritry ny toriteniny teny teny. Izany angamba no tsara indrindra fantatra andinin amin'izao androntsika izao. Ary koa ho diso fandray indrindra fahazoan-kevitra io andininy io dia midika no diso fandray ny fomba isika dia tokony ho tia ny hafa. Noho izany, zava-dehibe ny mangataka ny fanontaniana: Inona no tian'i Jesosy holazaina rehefa milaza amintsika tsy hitsara? Inona no tsy midika Last faran'ny herinandro, izaho sy ny vadiko nanatrika ny fanambadiana any am-piangonana atrikasa. Rehefa ...
Isaky ny mamoaka sary ny fianakaviako tao amin'ny media sosialy, ny valin-dia mahafinaritra foana. Ny mahazatra indrindra dia, "Ny zanakao dia tena tsara tarehy!"Na" Inona no tsara tarehy fianakaviana!"Fa iray amin'ireo iombonana hafa valiny dia, "Moa ny vadinao fotsy?"Ny olona manontany ahy indraindray mampiseho koa. Ny valiny dia eny. Ny vadiko dia fifangaroan-Hongroà, Italiana, ary Poloney-izay ny ankamaroan'ny olona dia midika fotsiny eny, izy ny fotsy. Izany no ilaina ny sasany, fa manafintohina na mandiso fanantenana ny hafa mihitsy aza. Tsy mino aho fa na iza na iza dia tokony ho tohina na diso fanantenana ny volon-koditra fanambadiana, fa mbola te hiresaka momba ny antony ivelan'ny nanambady ny "hazakazaka. Ny fanapahan-kevitra ny hanambady olona avy amin'ny foko hafa fiaviana dia tsy ho mafy ny anankiray ho ahy. Tsy mbola nipetraka ary nanoratra avy ny mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka lisitra. Na raha nataoko, ny zava-misy fa ny vadiko dia tsy nahita ny fizaràna ny "Martin" dia ho eo amin'ny mpisoloky sokajy. fa amim-pahatsorana, Tsy agonize noho izany, na mitady torohevitra momba ny na dia OK. Aho dia resy lahatra fa izy no vehivavy ho ahy ny hanambady, na dia tsy mainty. Misy mihevitra fa tsy hanambady olona tsy mitovy foko ...
Guest lahatsoratra avy any Jessica Barefield Mamelà ahy hanomboka amin'ny alalan'ny fanomezana ny Disclaimer. Ity lahatsoratra ity dia tsy mikasika ny haino aman-jery sosialy ny ratsy dia. Nampiasaina araka ny antonony, po tsara amin'ny fihetsika, dia afaka ny ho zavatra mahafinaritra. Ny teboka lahatsoratra ity dia ny hanondro fomba sasany izay haino aman-jery ara-tsosialy mety ho fandrika ho an'ny fiainana kristianina sy ny mampirisika anao mba handinika ny fonao rehefa tonga ao an-haino aman-jery sosialy sy ny fandraisana anjara fanjifana. Ireo no fomba dimy izay haino aman-jery sosialy manome sakafo ny faniriana feno fahotana. 1. Haino aman-jery ara-tsosialy dia afaka mandany fotoana na inona na inona izany izahay ary tsy naheno eo anatrehan'ny, saingy mendrika ny mamerina. Nampahatsiahy isika ao amin'ny Efesiana 5:16-17 fa ratsy izao andro izao, ary tokony hanao ny tsara indrindra mampiasa ny fotoana nomena antsika. Eritrereto mandritra ny fotoana fohy izay mety ho manao fa tsy mijery ireo toerana rehetra. Teo am-piandrasana amin'ny fotoana, afaka foana ny lisitry ny olona mba hivavaka ho eo amin'ny telefaonina sy handany ireo minitra fanampiny amin'ny vavaka ho an'ny fianakaviany sy ny namany. tokoa, nisy fotoana, na hafa, isika rehetra meloka ny mandany ora ao amin'ny Facebook tamin'ny andro ary tsy eo am-piandohan'ny ny Tenin'ny ...
Rehefa mandeha ianao amin'ny alalan'ny fotoana mafy, foana ny olona tsy mahalala izay holazaina. Ny vokany dia dikany clichés na trite ezaka mampahery anao. Foana aho nanana olana tamin'ny Cliché phrases- ny karazany izay tsy midika na inona na inona ho azy ireo ny olona nanao hoe: ka tsy tena manampy ny olona mandre azy ireo. Zavatra adaladala toy ny, "Chin ka" sy ny "Tsy Ho hahazo tsara kokoa." Tena? Ahoana no ahafantaranao? Tsy manao ny namana rehetra sitraka amin'ny fanomezana azy ireo fahazavana, fluffy ireo fanantenana izay tsy miorim-paka ao na inona na inona. Rehefa fanaintainana lalina Hits Hanozongozona mila mafy orina ny fahamarinana mba hanohana antsika. Nandritra ny bout amin'ny homamiadana, Christopher Hitchens Naneho fahasorenana toy izany koa amin'ny sasany ny dikany andian-teny no manary manodidina. Mandany vitsivitsy izy pejy manafika ny iray tamin'izy ireo tao amin'ny boky, fiainana an-tany. Hoy izy, "Manokana, Efa kely nitsahatra namoaka ny fanambarana fa 'na inona na inona tsy hamono ahy mahatonga ahy matanjaka.' "Izy avy eo hoe:, "Ao amin'ny tontolo ara-batana masiaka ... misy koa zavatra maro rehetra izay mety hamono anao, tsy hamono anao, ary avy eo hamela anareo ho malemy be. "Tsy mba afaka mahatsapa ny fifaliana? Izany toa mahakivy, Mihevitra aho fa marina Hitchens Azo lazaina. Tsy dia tena azo atao fa ...
Rehetra izao, ary avy eo aho miresaka amin'ny olona iray izay milaza fa te ho tonga Kristianina, nefa toa mihevitra ny fotoana dia tsy tena marina. Raha manontany azy ireo hoe nahoana, izy milaza amiko ny momba rehetra amin 'ny fahotany, ny fahadisoana rehetra, sy ny misavorovoro ny zavatra efa nataony tamin'ny lasa. I tsy miady hevitra aminy momba ny fahotany, fa izaho no hampihemotra indray ny tombantombana. Izy ireo mihevitra ho manana ho zareo fa mahafeno fepetra fahotana toa anao tsy avy amin'i Kristy, raha ny mifanohitra tanteraka marina. Ny maha-mpanota tsy mitandrina antsika amin'ny Kristy; fa ny antony tokony Azy. Raha toa isika ka miandry mandra-mijery ny hanaiky Azy tanteraka isika ho miandry Ho mandrakizay. Tamin'ny iray ny toerana tena teny notsongaina, Charles Spurgeon Mampirisika antsika mba tsy mijery ny tenantsika, ary ny manomboka mijery an'i Jesosy. Hoy izy: "The! Hoy ianao, 'Tsy ampy ny mibebaka.' Izany no mijery ny tenanao. 'Tsy mino ampy.' Izany no mijery ny tenanao. 'Tsy mendrika loatra aho.' Izany no mijery ny tenanao. 'Tsy afaka mahita,', Hoy i hafa, 'Fa manana ny fahamarinana.' Izany dia tena tsara ny milaza fa tsy misy fahamarinana; fa izany dia tena mety ny mitady ...
Ny fomba mamaly ny hafatra dia miankina amin'ny hoe iza izany avy. Mamelà ahy ianareo hanome ohatra anareo. Raha misy olon-kafa mandeha miakatra atỳ amiko eny an-dalana ary milaza, "Aoka aho mindrana ny fanalahidin 'ny fiara tena haingana. Te-hahazo vola avy amin'ny glove boaty,"Angamba aho nijery azy tahaka ny adala izy, ary mandeha eny. Fa raha ny vadiko dia hiakatra ho ao amin'i ahy ka milaza izany koa, Aho hanome azy ny fanalahidy faharoa tsy misy eritreritra. Isika hihaino sy hamaly hafa miankina amin'ny hoe iza no miteny. Ahoana no tokony ho tranga iray fanampiny. Raha misy ny namana tsara Nanizingizina fa tsy maintsy manaiky ny fahefana tanteraka ny fiainako manontolo, Angamba aho nijery azy tahaka ny adala izy, ka mandehana hahazo namana vaovao. Ary ho tsara ho ahy ny hamaly izany. Ahoana anefa raha Andriamanitra Izao-mihitsy hoe: toy izany koa ny tena? 2 Timothy 3:16 hoy i, "Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra." Izany no tsy ny rehetra andininy, fa ireo milaza teny dimy ampy misaintsaina ho androm-piainany. Ny zava-misy fa ny teny ao amin'ny Soratra Masina dia ny tenin 'Andriamanitra Izao-mihitsy no manan-danja. Ary mihevitra aho fa ireo ...
Air Jordana no malaza. Tsy hanao azy mafy mihalehibe aza, satria ny ray aman-dreniko ahy tsy nety hividy kiraro lafo vidy ridiculously. Tsy tiako izany, fa fantatro aho fa tsy hahazo ny tanako amin'ny mpivady. Noho izany aho dia voatery hiatrika - amin'ny alalan'ny mody tsy misy. Nisy lava roa taona miezaka handresy lahatra ny tenako fa mpampiofana Reebok hazo fijaliana dia stylish. Fa tahaka ny nahazo antitra, Takatro Jordana dia sarotra ny tsy miraharaha. Ny namako rehetra nanana roa na roa, ary iray amin'ireo namako dia downright manahy be loatra momba ireo. Rehefa fomba vaovao nivoaka, dia tsy hijanona fotsiny ao an-toerana ny Foot Locker rehefa nanana fotoana malalaka; Dia nanao ny fiainany mahazo fa mpivady vaovao. Ary nanao antoka fantany Jordana rehetra famotsorana daty, dia ho toy izany koa mividy ny kiraro amin'ny loko isan-karazany, ary izy no matetika mandany ny asabotsy maraina nitoby avy eo anoloan'ny fivarotana kiraro. Ary nitsoka ny saina. Ary farany dia tsy maintsy nanontany ny tenako, "Inona no tena manokana mikasika ireo kiraro?! Mazava àry aho voa mafy tokoa." Namako ny mieritreritra be momba ny Jordana nanao fanambarana. Na marina na tsia, izy ka nanao hoe ...
Tsy misy olona tia ny anarany droppers. Fantatrareo izay aho miresaka momba ny. Ireo olona izay te ho fantatrareo fa fantany ny olona fa mety te-hahafantatra. Rehefa mieritreritra aho "namedropper,"Misy lehilahy iray izay tonga avy hatrany ao an-tsaina. Aho nifanena taminy fotsiny ny fotoana vitsivitsy, fa isaky ny efa niresaka, antsasaky ny resaka dia nakarina amin'ny miharihary anarana nilatsaka. Fantany tsara maro ny "fotoana lehibe" ny olona, ary manana fahafahana hangala mitombina ireo anarana ho any resaka. Ity ohatra. miteny aho, "Hey olona, amin'ny firy izao?"Ny valin-: "Oh, izany tamin'ilay antoandrobe iny. Mampahatsiahy ahy andro izany aho nilalao putt putt amin'i Michael Jackson amin'ny mitataovovonana any Paris. "Teny? amim-pahatsorana, Izany dia midika hoe tsy anarana fotsiny droppers izay irk antsika aza. Izany ny olona izay mirehareha amin'ny ankapobeny. Reraka isika maniry ny mandre olona mirehareha momba ny sekoly ambaratonga faharoa baolina kitra andro (tonga ny fotoana hifindra amin'ny, tompoko). Tsy sasatra ny tombontsoa namana izay mahita fomba ny bitsika momba toerana ireo vahiny rehetra mitsidika. Ary tsy manana faharetana be ho an'ny olona izay tsipiriany ho antsika rehetra izy ireo hividy zavatra lafo vidy (raha tsy ry zareo rappers, mazava ho azy). Na izany covertly hirehareha momba ny ...
Foana aho miakatra amin'ny Trayvon Martin Iny resabe iny dia hatrany am-piandohana. Toy ny maro aminareo, dia nijery ny vaovao mikasika ny, vakio ny lahatsoratra, dia niresaka momba izany amin'ny namana. Tsy manapaka ny namany ka nampahatezitra-bahoaka resaka tena ilaina ny fifanakalozan-kevitra momba ny hazakazaka any Amerika. Ny tena zava-misy ny fanavakavahana ratsy tarehy dia nanosika teo anoloan'ny ny atrehinay, ary na dia ireo izay te-mody tsy misy noterena mba hiresaka momba izany. Nandritra ny herintaona taty aoriana, Trayvon ny mpamono olona efa nanandrana ka nahita fa tsy meloka. Midika ve izany fa tokony hifindra eo amin'ny olana? Ary nahita azy tsy manan-tsiny, ka ireo "hazakazaka olana" dia aza manao toy tena rehefa nieritreritra izy ireo, marina? Tsy azo bebe kokoa ny fahamarinana. Izaho tsy mieritreritra ny miady hevitra momba ny zava-misy, Trayvon ny toetra amam-panahy, na ny didim-pitsarana ao amin'ny toe-javatra mampalahelo ity, fa izaho no mieritreritra ny sasany tokony hanohy resaka. Ny fitsarana dia ny, fa ny resaka tsy tokony ho. Nahoana ny Interest? Fantatro fa maro no manontany tena hoe nahoana io fitsarana manokana no voasambotra ny sain'ny maro. Ny hafa manontany tena hoe fa maninona ny sasany dia toy izany ry namana mainty haingana ny miara-mitondra Trayvon Martin, na dia teo aza ny zava-misy fa nanana olana araka ny sitrapony ihany ....
Rap & fivavahana
Fa raha mbola Tsaroako, valahana hop izahay dia nanana ny mieritreritra be momba an'Andriamanitra sy ny fivavahana. Tsy hoe milaza fa ny fivavahana rehetra rappers devotees. Fa vitsy rappers - na mpanakanto raha tsy izany - dia afaka hanozongozona ny faniriana hampiditra an'Andriamanitra any ho any ny kanto. Tena voajanahary sady tsara ho antsika ny miresaka momba an'Andriamanitra, Fa ny fanontaniana dia, inona isika hoe:? Ny sasany hilaza hoe, "Tena marina mozika. Aza maka izany ho zava-dehibe toy izany!" Inona anefa no nisy mpanao rap milaza ny Mika dia lehibe kokoa noho ianao dia mety hieritreritra. Ny sasany nampiasa nahatapaka ranjo hop izahay mba haneho ny tena finoana ara-pivavahana na ny tsy fisian'izany. Islam, The Five Percenters, Fivavahana Kristianina, hisalasala momba ny fisian'Andriamanitra, tsy hino an'Andriamanitra, sy ny fivavahana hafa efa rehetra no nasandratry ny alalan 'ny teny kanto. Heveriko valahana hop izahay dia miavaka mifanaraka hanehoana tsy fivadihana sy ny fanoloran-tena ny na inona na inona izahay liana. Amin'ny ampahany noho ny kolontsaina ny mandresy lahatra rawness ary indraindray noho ny valahana hop izahay bebe kokoa mamela teny, dia toy izany no afaka tena "mampianatra." Fa ny ankamaroan 'ny fotoana dia bebe kokoa atodiakanga hop izahay tahaka ny nanety noho ny kilasin'ny Sekoly Alahady. Mihazakazaka eny Rappers mampiasa ny volany teo am-bavan'ny, na fantatr'izy ireo izay miresaka momba na tsia. fahatsoram-po vs. Midika hoe sahisahy ratsy ...
Tany am-piandohan'ity taona ity aho, dia ny fitsidihana miaraka amin'ny boky vaovao, The Good Life. tsirairay alina, Nomeko ny lahateny izay niezaka namaly ny fanontaniana, "Inona no dikan'ny hoe miaina ny fiainana tsara?" In Chattanooga, TN, dia voarakitra ny hafatra sy namoaka azy aho ambony. Hoy ny boky navoaka tamin'ny Oktobra 1, 2012 ary afaka hividy eto. Manazava bebe kokoa momba ilay boky hoe Azonao Atao tsindrio eto. Azonao atao ny mividy The Good Life rakikira eto. Moa ve ianao tsara ny fiainana ny fiainana?
Ny Hoavy ny Trip Lee
Ny ankamaroan'ny fantatrareo ahy ho toy ny mpanao rap sy ny mpanakanto, fa ny marina dia, ao am-pony foana aho mpitory. Fa raha mbola foana aho manao mozika, ny faniriana lalina indrindra no mba hitory ny Filazantsara sy hanambara ny famindram-po sy ny voninahitra 'i Jesoa Kristy. By ny fahasoavana aho Nanana fahafahana mampiasa ny mozika mba hanao izany amin'ny sehatra-bahoaka. Tiako aho isaky ny faharoa izany ary niezaka aho ny hanao izany amin'ny fomba tsara indrindra. Nandritra ny taona maro, Nahatsapa aho Andriamanitra niantso ahy ary manofana ahy tsy mba ho hira, fa koa mba hitory sy manoratra. Izany no mahatonga aho tamin'ny herintaona nanoratra The Good Life, boky iray misitrika lalina kokoa ao an-hafatra ao ambadiky ny rakitsoratry ny mitovy anaram-boninahitra. Izany ihany koa ny antony nanambara farany latsaka fa tsy ho mandeha tena betsaka araka izay efa. Te-hianatra ny fomba ho mahatoky pasitera, ary izay ihany no tena mitranga ao anatin'ny fiangonana eo an-toerana. Noho izany aho maka ny fotoana vola amin'ny fianarana avy amin'ny pasitera an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana any Washington, DC. Tompo vonona, toy ny manompo ny mpiasa tao amin 'ny fiangonako, Aho ho afaka koa ...
Ny hany ilaintsika dia Andriamanitra
Ity ny raki-peo avy amin'ny toriteny vao haingana no nitory ny Salamo 142. Isika rehetra mandalo fotoan-tsarotra, fa ny salamo mampiseho antsika fa na dia eo amin'ny fotoana indrindra dia afaka mahita ny zavatra rehetra izay ilaintsika an'Andriamanitra. Ny hevitra efatra ireo: I. Andriamanitra no namantsika amin'ny andro fahoriana II. Andriamanitra no fiarovana avo amin'ny andro fahoriana III. Andriamanitra no Sarobidy amin'ny andro fahoriana IV. Andriamanitra no Mpanafaka amin'ny andro fahoriana
Zava-dehibe ny teny
Ity misy toriteny no nitory roa volana lasa izay tao amin'ny Matio 12:36. Mivavaka aho fa ho fampaherezana ho anareo.
One Enina ambin'ny folo Video
Amin'ny fankalazana ny famoahana ny boky, The Good Life, Ity ny lahatsary ofisialy ny "One Enina ambin'ny folo," avy ny raki-kira vaovao, antsoina koa hoe The Good Life.
The Good Life Mini Fanadihadiana
Makà Jereo ambadiky ny sehatra amin'ny Trip Lee araka izay miresaka momba ny vato misakana, ao ny fanaovana ny rakikira farany "The Good Life."
Ity misy toriteny vao haingana no nitory tao amin'ny Jeremia 31:33. Ny hevi-dehibe dia: I. Andriamanitra dia miasa iraisam-pirenena II. Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny firenena III. Andriamanitra dia miasa Interpersonally IV. Andriamanitra no any am-piasana
Nijery ny ankamaroan'ny fivoriambe ara-politika farany izao tapa-bolana. Ny mpandahateny ao amiko tsy afaka nanampy fa ny-mandinika ny hafatra sy ny oratory fahaiza-manao ny kandidà sy ny mpanohana. Ny olona tsirairay amin'izany sehatra niezaka handresy lahatra anao manokana tantara sy / na ny lehibe fampanantenana. Miaiky aho, sasany ny faniriany dia tsara, fa ny ankamaroan 'ny kabary nahatsiaro kajy, foana, ary ara-politika fotsiny- ho ahy, fara fahakeliny. Ny sasany amin'ireo hevitra ireo miteny mahitsy ka diso koa. Fa sehatra miady hevitra dia tsy ny hevitra lahatsoratra ity. Ny iray amin'ireo zavatra aho dia tonga saina fa raha mbola ny antoko dia miezaka mivarotra anao ny kandidà, izy ireo koa dia miezaka mivarotra anao ny worldviews. Araka ny azy ireo, propserity ara-nofo dia ny tany nampanantenaina, ary ny antoko te ho an'i Mosesy. Ao ny heverina, ny fiainana tsara dia mahazo nanan-karena rehefa miasa mafy, ary ny kandidà dia ny Mpamonjy izay afaka hitondra anareo any. Ary misy na inona na inona ratsy momba ny harena. Ary rehefa novalian-tsoa ny asa mafy dia zavatra tsara, fa afaka ny tsy ho izay ny fanantenantsika lainga. Ny harena dia tsy tokony ho ny farany tanjona, dia tokony ho fitaovana ho lehibe kokoa farany. Izahay koa tsy afaka ny ...
Ity misy toriteny vao haingana no nitory ny Salamo 95:10-11. My 3 hevitra tsotra: I. Mampahasaro fahotana ny fahatezeran'Andriamanitra II. Ny fahotana dia Alernate Path III. Ny fahotana miaro antsika amin'ny fitsaharan'Andriamanitra Mivavaka aho mba izany no mampahery anao
Trip Lee amin'ny "Mahafinaritra ny Fiainana" tsy maniry ao amin'ny Vimeo. Ny hira voalohany nosoratako ho an'ny rakikira farany indrindra, "The Good Life" dia hira antsoina hoe "Mahafinaritra ny fiainana." Andriamanitra te nanontany ahy momba ny hira sy ny foko ao ambadika. Ity ny lahatsoratra bilaogy iray manontolo. Ary eto dia ny tonony amin'ny hira, izay manasongadina V. Rose: hook: Fiainana Beautiful Inside Living Moving niaina tahaka izany anie ny Fanantenana Mitsangàna Andriamanitra nahalala ihany izay efa nisy nanao tsara tarehy rehefa nanome Beautiful Life Verse 1: Ry rahavavy, I mandre ny toerana anao amin'ny fantatro fa tsy mora ny bout na inona na inona mandeha amin'ny alalan'ny fa Misy zaza ao an-kibonao, fa tsy mitady hanao izany ianao Te maka izany indray rehetra raha fantatrao fa, fa ianareo tsy manana fotoana io tsipiriany io, miaraka amin'ny olon-tiany, fa tara alina Rehefa misaina ihany ve ianareo dia fanaovana ny fitiavana, mba hahatonga ny fiainana Ary ankehitriny Izany dia midika hoe mahatsapa tsy ara-drariny, ny olona dia tsy tahaka anao dia tsy nahazo aina, mitifitra, ny fotoana dia tsy tena marina dia tsy tena afaka milaza aminareo fa Azoko tsara ny fanaintainana Fa samy fantatro tsy tokony kivy sy menatra Ary fantatro fa ny zaza ao an-kibo dia tsy lalao dia ny nahazo ...
Ny olona izay manana an'Andriamanitra noho ny harena manana ny zava-drehetra ao amin'ny One. Maro ny olon-tsotra dia mety holavina harena azy, na raha misy mahazo manana azy, ny fifaliana ny azy ka dia ho mora tezitra fa tsy ho ilaina ny fahasambarana. Na raha tsy maintsy mahita azy izy, iray rehefa afaka indray, dia zara raha hahatsapa ny fahatsapana ny very, fa manana ny Loharanon'ny zava-drehetra ananany ao amin'ny fahafaham-po rehetra ho iray, fahafinaretana rehetra, rehetra mahafinaritra. Na inona na inona mety ho very izy raha ny marina dia tsy very na inona na inona, fa izao no izany rehetra izany ao amin'ny One, ary manana izany fotsiny, ara-dalàna ary mandrakizay. A.W. Tozer, Ny fikatsahana an'Andriamanitra
Masculinity ara-baiboly sy ny mahazava-dehibe ny Modely avy maniry ao amin'ny Vimeo. Ny namany ao amin'ny maniry Andriamanitra nanontany ahy fanontaniana vitsivitsy mikasika ny sakana mba lehilahy lehibe sy ny fomba hamaha ny olana. Ireto no nolazaiko hoe:
Ity ny lahatsary avy amin'ny Vovonan'ny toriteny vao haingana Fiangonana in Raleigh, NC. I nitory tamin'ny Mark 5:1-20 momba ny hery, fahefana, ary famindram-po 'i Jesoa. Manantena aho fa ho fampaherezana ho anareo
Eritreritra Romanina 8
Ahoana no Romans 8 Fanampiana Trip Lee tsy maniry ao amin'ny Vimeo. Ny namany ao amin'ny maniry nanontany ahy Andriamanitra mba hizara ny momba ny andinin-teny ao amin'ny Soratra Masina izay manampy ahy indrindra. Ato amin'ity Clip misaintsaina Romanina toko faha- 8
Thoughts amin'ny Robot
Trip Lee Tsy maniry ny Robot avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Vimeo. Nandritra ny fanadihadiana vao haingana, Andriamanitra maniry nangataka ahy mba hiresaka kely momba ny hira, Robot avy amin'ny The Good Life
Inona no atao hoe Filazantsara? tsy maniry ao amin'ny Vimeo. Clip iray hafa avy amin'ny ny tafatafa niarahana tamin'ny maniry Andriamanitra. Nanontany ahy izy ireo raha afaka Rap ny Filazantsara amin'ny 2 minitra. Izany no ezaka
Ity dia ampahany amin'ny tafatafa nataony tamin'ny maniry aho Andriamanitra. Aho hamoaka ny faritra hafa toy ny DG mametraka azy Hip Hop ary ady amin'ny fahotana avy maniry Andriamanitra ao amin'ny Vimeo.
The Good Life ny Bokin'i
Na iza na fantatrao, Foana aho miasa amin'ny boky iray mba hiaraka ny raki-kira vaovao, The Good Life. Eny ary ity boky ity dia fanafahana amin'ny Moody Mpitory Oktobra 1, 2012. Read more about izany ao amin'ny gazety eto ambany. Ary mankanesa any amin'i TheGoodLifeTheBook.com ho nampahafantatra rehefa mamoaka. HIP hop Trip LEE hanafaka Début BOKY NY FIAINANA TSARA Oktobra 1, 2012 ALALAN'NY Moody MPITORY Upcoming manorina ny tetikasa amin'izao fotoana izao famoahana rakikira ary ahitsiny "The Good Life" ny fanamby ny olona mba tsy velona amin'ny fahazavan'ny lainga fa hiditra tamin'ilay tetikasa ny vaovao sy be voninahitra kokoa dia. Los Angeles, Kalifornia. (Mey 17, 2012) -Billboard Tabilao-topping nahatapaka ranjo hop Trip Lee dia gearing ho amin'ny famoahana boky bitany, The Good Life (Moody Mpitory). Ny fitohizan'ny ny rakikira farany izay navoaka tamin'ny Aprily 10, 2012 ny alalan 'Vokatr'izay Records, The Good Life dia namely fivarotana ny firenena Oktobra 1, 2012. "Nandritra ny taona maro, Foana aho manao mozika fa ireo olana izao tontolo izao ny fomba fijery sy hevitra an'i Kristy - fa efa nisy foana ny fetra ny mozika, fa misy ihany be dia afaka mifampiresaka amin'ny hira,"Hoy i Trip. "Ny rakikira nanome mpihaino sarin'ireo ny fiainana tsara, ary ny boky dia ...
Hiaina ny Good Life Live
The Good Life kicks fitetezam-paritra ho eo amin'ity herinandro! Fantaro izay daty dia ho akaiky indrindra ho anao. Ho ao isika Minneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, ary Dallas. More daty homena ela ihany koa! Tsindrio ny rohy ho an'ny tapakila, na any amin'ny ReachRecords.com/events.
Ireo no tononkira avy ny hira iLove eo amin'ny raki-kira vaovao "The Good Life." Na iza na iza hafa mijaly avy iLove? Verse 1: Ny anaran'ny sipako manomboka miaraka amin'ny I Mamiratra mamirapiratra toy ny kintana eny amin'ny lanitra fitehenan-tanana teo anilako, rehefa maizina ny hazavana izy no tsy miova izy maro, ary very eo ny masony nandinika azy fa tsy mijery ny dingana mihazakazaka ho azy rehefa mifoha tsy misambotra ny fofonaina izy ny addicting, ny marina: izahay fiends Fa isika tsy sniffing lakaoly, izahay glued fotsiny ny efijery izy mitondra antsika, jereo ny porofo rehefa injao fa angamba isika haka Te roa izy roa olombelona Ny rahavavy? Misy lehibe kokoa ny sasany kely fampitahana matetika izahay ny amin'ny en isan'andro mba azy, mba hahazoana azy isika rehefa nilatsaka na dia tsy manam-bola afaka izy hanontany Ahy ianao raha tena mila azy aho? I ho tahaka, "Karazana" Fa rehefa nahita azy tao amin'ny tsenambarotra tsy maintsy fitsarana azy foana aho ny amin'ny Accessories, ya ankizilahy no mamabo azy izy tiako teo amin'ny fiainako, Manao na inona na inona aho ho azy Adinoy momba ny Dime zazalahy, dia ny ampahefatry bebe kokoa tahaka ny aminy aho amin'ny fotoana rehetra,...
The Good Life eto!
Ny fahefatra irery Album, "The Good Life" dia fomba ofisialy no navoaka! Hividy ny raki-kira avy amin'ny iTunes eto. Azonao atao ihany koa ny maka ny rakikira ao fivarotana tao Lifeway, Family Christian, Mardel, ary Target & Wal-Mart (Select fivarotana). koa, dia afaka mijery ny lahatsary vaovao ho an'ny "Tsara aho" mampiseho Lecrae eto. Tsy niasa tamin'i Voice ny Maritiora amin'ny ity iray ity mba fanairana momba ny fanenjehana sy mampahery ny mpino ho mafy orina. Miaraha ahy amin'ny nivavaka fa ny Tompo dia mampiasa ity tetikasa ity ho fanamby sy hampaherezana maro!
Nahoana no Tsara About Good Zoma?
Ara-dalàna raha mahatsiaro ny andro ny olona ny ho faty. Na iza na iza no namoy olon-tiana misy mahalala fa ianao tsy hanadino ny andro dia nandroso. Izany ny faran'ny fiainana, ary izany mahavaky fo. Mazava ho azy, amin'ny maha-olombelona, tsy mahatsiaro fotsiny olon-tiana. Rehefa olo-malaza maty zava-dehibe aloha, isika hahatsiaro sy hitomany ny andro dia nalaina avy amintsika ihany koa. Ny firenena dia mahatsiaro ny andro Martin Luther King Jr. dia voatifitra, ary ny andro John F Kennedy novonoina. Fa ireo andro manokana dia tsy antsoina hoe tsara. Ireo no mahatsiravina andro, izay malala lehilahy ireo novonoin'ny mampidi-doza namono. Na izany aza, roa arivo taona lasa izay i Jesoa avy any Nazareta nisy namono noho ny ratsy toetra mpamono, ary mahatsiaro izany andro izany ho "Tsara" Zoma. Inona no tena tsara mikasika ny andro, raha ny tena niresaka momba ny olona teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia kerisetra nokapohina sy novonoina noho ny fahavalony? Ny zava-misy fa ny olona ratsy fanahy dia tetika hamono ny Zanak'Andriamanitra no mampalahelo ary izany isalasalana fa ny lehibe indrindra natao hatramin'izay fahotana. Fa ny fahafatesany dia tsy toy ny fahafatesana hafa tany alohany, na tato aoriany . Afaka miantso andro izany "Tsara" Zoma noho ny antony maro. Izy ...
Nohazavaina tsara aho
"Mety ny amiko" dia iray amin'ireo farany HIRA nosoratana ho an'ny raki-kira vaovao, The Good Life. Lecrae ary raha ny marina aho nanoratra ka voarakitra hafa tanteraka hira, ary tia azy tamin'ny voalohany. Nefa tamin'ny farany dia nanapa-kevitra dia tsara tarehy fotsiny; ary te hihataka zavatra lehibe. Noho izany dia nilalao vitsivitsy mitempo ho azy fa efa tsy voasoratra tononkira, satria mbola, ary izahay roa-pitia ity iray ity. Tena Epic, mahery setra, ary manintona. Nolazaiko taminy no te-hanoratra ny hiram-pirenena izay nifandray ny fiarovana ao amin'i Kristy. Te mba hampaherezana ny Kristianina mba tsy miaina ao anatin'ny tahotra, ary manomboka miaina ao amin'ny Romana 8. Nanapa-kevitra izahay ny "Tsara aho" foto-kevitra, Nangataka ny Tompo izahay noho ny fanampiana, ary nanomboka nanoratra tamin'ny zorony mifanohitra ny Atlanta Vokatr'izay Studio. Voarakitra ankamaroan'ny izahay ny vocals ny alina, Ary nony nanao izahay rehetra tia azy. Antenaina izany fanazavana ny tononkira dia hanampy antsika mandevon-kanina ny votoatiny ... Verse 1: I mandre ny olana ny ho avy ho ahy, ny fahafatesana no eo amin'ny lalana baravarana / tahotra ho very hoy I'ma Bro, fa tsy ny zavatra Tompoko hoe: / Hoy izy hoe tsy meloka aho, fa aza ...
Hisoratra anarana ho an'ny lehilahy Up Conference eto ary hianatra bebe kokoa momba ny rakikira “The Good Life" Eto
Ny Fitiavana Lehibe Indrindra Rehetra
Ny olona rehetra te-ho tia. Na isika manaiky izany na tsia, isika rehetra manana izany faniriana voajanahary hahatsapa niankohoka sy nankasitraka ny olon-kafa. Maro amintsika no mandany ny fiainany manontolo ny olona iray mitady ny ho tia antsika, amin'ny fanantenana fa misy olona- na iza na iza- dia fahafaham-po izany faniriana ao anatiny. Tsara raha mieritreritra ianao ny amin'ny olon-tiany ny tenanao intsony amin'izao fotoana izao ary manantena fa ianao ianao fahafaham-po izany faniriana farany, Tiako ho fantatrareo fa ny tanjona dia ambany loatra. Tsy hahita ny lehibe indrindra ny fitiavana ny rehetra amin'ny jiro mazava sakafo hariva anio alina. Na izany aza, misy mahery indrindra, mahafa-po rehetra, fitiavana tonga lafatra misy anareo. Misy Andriamanitra, izay tia anao mihoatra noho ny azonao an-tsaina mihitsy. Ny fitiavany dia tsy miova, ary ianareo tsy ho Woo Azy, na miasa ho azy. Antsika ve Andriamanitra Fitiavana? Fantatro indraindray maro amintsika na tsy hanontany tena raha tena tia antsika Andriamanitra. Toa izany lavitra. Ary angamba isika Te misalasala intsony raha toa ka nanao zavatra mba ataovy mazava tsara ho antsika. Ny fahamarinana isika, Izy efa manana. Hoy ny Baiboly, "Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, Maty hamonjy antsika Kristy." Ary hoy indray izy,...
"Robot" no hira voalohany ny rakikira atsy ho atsy "The Good Life" fanafahana Aprily 10. Lyrics ho an'ny hira sy maimaim-poana Download dia ambany aho fa tsy mba ny milina, Tsy izaho dia Clone ianao tsy ny puppeteer ary izaho tsy nahazo drôna tompony vaovao ary manaraka Azy irery tiako fiainana tsara intsony aho mandra-Verse 1: Hey aho no teraka latsaky ny olombelona Fantatro fa toa adala aho Fa tena teraka ny milina toy ny zazakely No tena fiainana ao ahy, Vao avy nilalao ny anjara No tena fanaraha-maso, Vao avy nanao izay Nolazaina tamiko aho mba nahazo ny voalohany, Aho Andro iray monja antitra nefa tsy manana fahafahana, hahatonga ny fony lalana mangatsiaka ny foko nandray ny baiko, Tsy hotapahiny ny lasitra namidy ho andevon'ny fanandevozana ary tsy afaka hitondra fanaraha-maso izany fotsiny aho bolo amin'ny milina paty mbamin'ny milina ny namana, ary ny milina mikoriana Living fomba milina, mahatonga izany rehetra fantatro Mandra efa reko fa afaka ho afaka amin'ny milina ny fanahiko, Aho toy ny ... Hook Nahoana ianareo miezaka foana ny hifehy ahy? Ianao tsy ny lehibeko izany ...
Aho Tsy Robot
"The Good Life" latsaka Aprily 10. Get “Robot" maimaim-poana eto
Fa ny tapany voalohany 2011, Aho, tsy mba nanao hira, tsy misy endri-javatra, tsy mampiseho, tsy misy na inona na inona. I Nifindra tany Washington DC sy naka olona tokony ho 5 volana eny noho ny asa fitandremana internship. Na dia tsy nandeha aho izao tontolo izao sy mijoro eo anoloan'ny ny ranomasina ny olona isan-alina, dia iray amin'ireo tena taon-jina teo amin'ny fiainako. Rehefa tapitra ny internship nanomboka nandeha indray aho, ary moramora nanomboka niasa tamin'ny mozika vaovao. Around lavo aho ho tanteraka daka fitaovana miasa eo amin'ny rakikira fahefatra Solo. Ary rehefa afaka volana ny asa mafy, ny raki-kira dia tsara tarehy be vita. Tsy afaka maneho ny fomba na dia faly aho handefa azy. Mijery foana aho mba hanome ny olona zavatra tsy nanome azy eo anatrehan'ny. Tsy te-remake rakikira efa nanao aho. Te hanome anao ny raki-kira vaovao, miaraka amin'ny mozika vaovao, sy ny fomba vaovao amin'ny fankalazana iray ihany ny fahamarinana taloha. In 2006 eo an-tanako rakikira voalohany, Raha toa izy ireo ihany Fantatro, Te hilaza ny olona momba ny Andriamanitra be voninahitra izay tiako ho fantatr'izy. In 2008, "20/20" nivoaka aho ary te-handrisika ry namana mba hahita ny Tompo amin'ny tena fahitana. 2 taona maro taty aoriana, "Teo anelanelan'ny ...
be herim-po Leadership
Ity MLK mpitarika ny be herim-po amin'ny miseho (tsy lazaina intsony ny sasany amin'ireo soratra tsara indrindra hatramin'izay aho namaky). Tsy mety ny hanaraka lalàna tsy ara-drariny sy tsy mety hiandry amim-paharetana. Izy maka ny dingana voalohany ho an'ny iray firazanana ny olona rehetra. Amin'ny maha-lehilahy mainty, Feno fankasitrahana lalina aho ho an'Andriamanitra noho ny asa tanteraka amin'ny alalany. Ary toy ny Kristianina, Te-hiady ho amin'ny rariny araka mafy tahaka ny nataony, fitandremana ao an-tsaina fa i Jesosy ihany no afaka mitondra ny rariny tonga lafatra. Ary Izy no. Ity ny ampahany avy amin'ny MLK ny malaza taratasy. Tokony hamaky ny zavatra rehetra rehefa tonga ny fahafahana. "Efa niandry mihoatra noho ny 340 taona ho an'ny lalàm-panorenana sy Andriamanitra nomena zo. Ny firenena Asia sy Afrika dia mifindra amin'ny jetlike haingana ho amin'ny fahaleovan-tena ara-politika hahazoana, nefa mbola mikisaka amin'ny soavaly sy kalesin-haingana amin'ny fahazoana ny kapoaka ny kafe amin'ny sakafo antoandro manohitra. Angamba dia mora ho an'ireo izay tsy mbola nahatsapa ny zavamaniry zana-tsipìka ny fanavakavahana ny hoe, "Andraso." Fa raha nahita masiaka vahoaka romotra Lynch ny reny sy ray amin'ny sitrapony sy handentika ny rahavavy sy rahalahy ao amin'ny haitraitra; Ary rehefa hitanao feno fankahalana polisy manozona,...
Aingam-panahy avy amin'ny Lowercase King
Amin'izao fotoana izao dia mankalaza ny lova ny lehibe indrindra mpitarika ny Civil Rights hetsika, Dr. Martin Luther King Jr. Nampiasa ny Tompo io lehilahy io mba aingam-panahy ny firenena, ary mifindra ny olona mankany amin'ny fitoviana. Mbola asa tokony hatao, fa ny fanomezana dia sarobidy. Tsy misy mahery fo tanteraka, ary Dr. Mpanjaka tsy nisy afa-tsy, fa mahafinaritra azy amin'ny fomba maro sy aingam-panahy aho ny lova navelany. Ireto misy zavatra telo momba ny fiainany izay aingam-panahy ahy. 1. Passion for Justice Dr. Mpanjaka i Naharikoriko noho ny tsy rariny izay manjaka eo amin'ny tontolo misy antsika, ary nanolo-tena ny ady hamelezana azy. Ao amin'ny Baiboly, dia nahita ny fahitana noho ny an'izao tontolo izao, Hitany ny mpaminany miantso ho amin'ny faran'ny fampahoriana, ary Izy dia liana ny hahita fa ny rariny tonga. I mankafy izany fitiavany ny rariny, ka mangataha amin'ny Tompo dia manohy ny asany izany amin'ny fony. Te-hiady ho an'ny ampahoriana, ary hitory teny soa mahafaly amin'ny fanantenana. 2. Mpitarika Na dia eo aza ny youthfulness, Dr. Mpanjaka-paminaniana mazava tsara kabary sy ny vato krystaly fahitana niseho nitondra azy toy ny mpitarika ny hetsika. Tsy mipetraka ary mitaraina, dia vao mainka ka ...
Na dia ny fahasambarantsika sy fampiononana handao antsika, Afaka ho tanteraka isika antoka Andriamanitsika dia tsy. Ezra 9:9
One Fiainana: Hizara azy
Roa herinandro lasa izay, Dia niteny tao amin'ny Campus Outreach National Conference momba ny andraikitry ny mpino rehetra hitory ny filazantsara. Ny andinin-teny i 2 Corinthians 5:18-21. Ity ny lahatsary avy izany fivoriana. One Fiainana | Hizara azy - Trip Lee avy amin'ny Campus Outreach ao amin'ny Vimeo. Raha liana ianao, Ity ny lahatsary avy amin'ny tontonana fifanakalozan-kevitra aho, dia anisan'ny ihany koa. Ny adihevitra dia momba ny toeram-pianarana amin'ny asa fanompoana, fiangonana eo an-toerana, ny Iraka Lehibe, etc.: Panel pasitera avy amin'ny Campus Outreach ao amin'ny Vimeo. Plus, Manoro hevitra anareo aho hijery tsara hafa rehetra ny haino aman-jery avy ao amin'ny fihaonambe. Nisy fampianarana lehibe taonina izay Mino aho fa ho hitanao ny ho fampandrosoana.
Efa nandà ny Andriamanitry ny Izao Rehetra Izao? Mino izany na tsy, izany no fanontaniana manan-danja ho antsika rehetra mba hieritreritra. Tena mazava ao amin'ny Soratra Masina fa ny fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra ireo izay matoky an'Andriamanitra sy mino ny Vaovao Tsara, ary marina ny fitsarana dia tanterahina amin'ny ireo izay mandà Azy. Fa misy dia mihoatra noho ny fomba iray mandà an'Andriamanitra. Ireto misy telo izay hita ao amin'ny Testamenta Vaovao. 1. Mandà fa i Jesosy no iza izy nilaza fa "Iza moa no mpandainga raha tsy izay mandà fa i Jesoa no Kristy? Izany no ilay antikristy, dia izay mandà ny Ray sy ny Zanaka. Tsy misy olona izay mandà ny Zanaka no manana ny Ray. Na iza na iza manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa." 1 John 2:22-23 Maro ny olona ao amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny izay mihevitra ny tenany ho ara-panahy na ara-pivavahana mihitsy aza ny olona. Mino izy ireo fa misy Andriamanitra, ary manandrana ny hanompo azy amin'ny fomba manokana ireo. Angamba izy ireo dia nahita an'i Jesosy ho toy ny mpampianatra lehibe, na mpaminany avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mino fa i Jesosy no iza izy nanao hoe: Izy no, izy ireo mandà Azy. Rehefa nahita an'i Jesosy ho toy ny lehibe fotsiny ...
Fa ny Kristianina, ny fanontaniana dia tsy na tsia dia hiatrika fakam-panahy isika, fa ahoana no mamaly rehefa manao. ao amin'ny Lioka 4:1-2, isika dia mamaky momba ny fakam-panahy an'i Jesosy sy ny fomba Hoy ny navaliny. Ity ny raki-peo avy amin'ny toriteny fohy no nitory tamin'izany ny fiangonako andalana amin'ny volana vitsivitsy indray. Te hijery an'i Jesosy 'ny fakam-panahy, handinika ny fankatoavana, ary eritrereto hoe inona azontsika ianarana avy amin'izany toe-javatra. Inona avy ireo zavatra tokony hahatsiaro amin'ny fotoanan'ny fakam-panahy? Ireto ny hevi-dehibe: I. Andriamanitra no mamela ary Mampiasa Fakam-panahy ho isan'ny ny Plan II. Fahalemena dia tsy fialan-tsiny ny manaiky ho resy III. Ny Mpaka fanahy Efa nandresy ny Fakam-panahy an'i Jesosy BragOnMyLord Mivavaka aho fa ny fampaherezana ho anao
Ahoana no olo-marina eo imason'Andriamanitra 'Andriamanitra? Izany dia mitovy marina tokoa amin'ny fanajana izay Kristy dia mpanota. Fa Nihevitra amin'ny fomba ny toerana, mba ho mpanao heloka bevava eo amin'ny efitrano, ary mety ho nanao amin'ny ho mpanota, tsy noho ny fahadisoana, fa ho an 'ireo hafa, satria izy madio sy afaka amin 'izay fahadisoantsika, ary mety hiaritra ny famaizana izay tokony ho antsika- tsy ny tenany. Izany dia ao amin'ny tahaka, marina tokoa, fa olo-marina isika ankehitriny ao aminy- tsy fanajana ny fandikana fahafaham-po ho amin'ny fahamarinan 'Andriamanitra amin'ny alalan'ny amin' ny asa, fa noho isika dia hotsaraina ny ao amin'i Kristy ny marina, izay efa hitafy ny finoana, mba ho antsika. John Calvin Tohin'ny miadana ary aoka Milentika amin'ny! Aho nahita izany notsongaina raha manomana ny hafatra ao amin'ny 2 Corinthians 5:18-21 fa ny Campus Outreach National Conference. Good zavatra
Ary tsy misy zavaboary izay miseho eo anatrehany, fa ny rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imason'Izay ny azy izay tsy maintsy hampamoahina. Hebreo 4:13
I maka azy, dia, Izany tsy finoana an i Jesosy
I haka azy, avy eo, fa ny tsy finoana an 'i Jesoa (TSY mino an'i Jesosy) dia ny miala amin'ny an'i Jesosy mba hitady afa-po amin'ny zavatra hafa. Sy ny finoana an'i Jesosy avy amin'i Jesosy noho ny fahafaham-po ny zavatra ilaintsika sy ny faniriana. Ny finoana dia tsy tena fifanarahana miaraka amin'ny zava-misy teo amin'ny lohany; dia tena ny fahazotoan-komana ao am-po, izay fastens amin'ny an'i Jesosy noho ny fahafaham-po. [hoy i Jesosy,] 'Izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy dia tsy hangetaheta mandrakizay!'John Piper
Tokony ho iray volana lasa izay dia nanoratra bilaogy milaza ry namana antony izany nanambady tanora. Tena nampahery ahy ny valinteny avy amin'ny rehetra izay mamaky azy io sy ny fivavako no fa ny Tompo dia hanampy antsika mba hieritreritra bebe kokoa ara-Baiboly momba ny fanambadiana. Raha toa ka tsy hahazo ny hamaky izany ato ny lahatsoratra nadika jereo izany eto: Nahoana aho Hanambady Dia Young? Ary rehefa afaka izany ry namana maro nanampy ahy ary nilaza tamiko ny fomba hanampy izany ho azy ireo, Nihevitra aho fa ho toy hanampy aoka kosa ny vadiko, Jessica, mamaly io fanontaniana io avy ny fomba fijeriny. Koa eto dia. Inona no nanao ny vadiko manapa-kevitra ny hanambady ka tanora? Hoy izy… 1. Nahita tsara fanahy Rehefa nihaona voalohany Trip, Tsy mbola mikasa ny hanambady amin'ny fotoana rehetra tsy ho ela. Fa hatramin'ny niandohany fotoana nivoaka, Fantatro nisy zavatra hafa momba azy. Izy no liana mikasika ny filazantsara amin'ny fomba izay tsy mbola hitako teo anatrehan'i amin'ny lehilahy ny taona. Izaho koa tsy nahita olona toy izany eo amin'ny fomba fijery hendry mampiaraka. Noho ny maha-mpianatra alohan'ny oniversite fantany tsara ny zavatra nataony fa ...
Ity misy lahatsary avy amin'ny toriteny no nitory tamin'ny fiandohan'ity taona ity any San Diego. Ny foto-kevitry ny fihaonambe no "noroahina", noho izany dia nisafidy ny hitory amin'ny Romanina 12:1-2. Inona no mitovy ny mpino ho "nandroahako?" Ny hevi-dehibe fa ny mpino dia tokony ... 1. Hoenjehin 'ny famindram-po 2. Horoahina ny fotoam-pivavahana 3. Hiova Fanantenana ny manampy!
Fotsiny aho Te-hisaotra ny rehetra izay nivavaka ho antsika fony isika amin'ny fitsidihana tany amin'ny kaontinanta lehibe an'i Afrika. -Katsaram-panahy ny Tompo namaly maro ireo vavaka, ary nampiasa anareo miaraka aminay mba hanao ny fiantraikany amin'ny enina samy hafa firenena. Ny fitetezam-paritra izao tonga amin'ny farany, ary dia nitodi-doha an-trano izahay anio alina. Te isika mankasitraka ny vavaka ho azo antoka foana Travel sy ny fahasalamana. Misy vitsivitsy amintsika no tsy mahatsiaro ho tsara loatra, ary tiantsika ny hanao izany an-trano salama. Tsy andriko ny famoahana ny bilaogy mba hilaza taminao ny momba ny diany. Mandra-pahatongan'izany dia mankasitraka ny vavaka
Manampy Antsika Avy amin'ny Unashamed Africa
Amin'izao fotoana izao izany 12:34 Izaho ao Botsoana. Izany voalohany tany Afrika ny andro manontolo sy ny Tompo no efa any am-piasana. Vokatr'izay tantsambo manontolo niantsona tao Johannesburg tamin'ny alina Izy ka nanidina ny Botsoana androany maraina. Tsy tonga mba hihaona taonina ny mpanohana androany tolakandro tao amin'ny fanaovan-tsonia nataontsika amin'ny fivarotam-boky kristiana eo an-toerana ary nanana lehibe sasany tafa sy dinika. Rahampitso hariva no fampisehoana voalohany ny fitetezam-paritra ary isika amped. Tena te izany fitetezam-paritra mba ho maro anaka ary ho tia ny fanampiana. Inona no azonao atao? Tsy maintsy koa manampy antsika amin'ny alalan'ny vavaka, ka maro no ho hisaotra ho antsika noho ny fitahiana nomen'ny antsika ny alalan 'ny vavaky ny maro. 2 Corinthians 1:11 Mino mafy isika fa ny Tompo mampiasa ny vavaka ny olony mba hanatanteraka ny drafitra. Noho izany dia afaka manampy antsika amin'ny alalan'ny fivavahana. Ireto misy fomba fototra dia afaka mivavaka ho antsika ary miaraka amintsika: 1. Fa tian 'ny Tompo antsika salama sy matanjaka 2. Fa dia fihetsika ny tenantsika toy ny mpanompo 3. Fa ny fampisehoana dia hahita soa 4. Fa ny Tompo no hiaro ny fianakaviantsika isika rehefa lasa 5. Fa Kristy tsy ho ...
Izany Septambra dia namoaka sarimihetsika fohy sy ny raki-kira antsoina hoe “Man Up" ny fanamby zatovolahy mba ho olona. Ity misy lahatsary mozika ho an'ny “Man Up Anthem." Afaka mividy ny horonantsary fohy sy ny rakikira eto
Ity ny raki-peo avy amin'ny fivoriana no nampianatra fiandohan'ity taona ity momba ny fitoriana ny filazantsara mahatoky. Ny Evanjelistra mahatoky amin'ny BragOnMyLord Ho an'ireo fohy ara-potoana, indro misy famintinana ny hevitra: 5 Toetra mampiavaka ny olona mahatoky tsy Evangelist ... 1. Mamihina, ary mahatakatra ny Filazantsara 2. Natoky sy Unashamed ny Filazantsara 3. Tia Indray Izay Very 4. Miankina amin'ny Andriamanitra ny Results 5. Nivavaka ho an'ny Very sy hahazo fahafahana hizara izany manampy Fanantenana
Ho anareo izay mbola tsy nahita ny lahatsary noho ny hira "ny fanafihan'ny (Hero)" indro Ilay izy. Ankafizo! Manantena aho fa manampy anao mba hitandrina ny masonao amin'ny Kristy.
Omaly no nanao tara nijanona alina tao amin'ny fivarotana mba haka zavatra vitsivitsy, ary dia nanana resaka tena mahaliana ny cashier. Nanao lahateny kely izahay rehefa scanned ny zavatra, ary avy eo dia nanolotra ahy ho karatra fihenam-bidy Nilaza taminy aho fa ny vadiko efa nisy iray. Izay raha ny resaka nahazo fahafinaretana. Fantatro izany resaka rehetra, tsara loatra, satria nanana azy aho matetika eo anatrehan'i. Izany dia mitovitovy amin'izao ... Olona: Inona!? Manambady ianao? Me: Yeah aho nanambadiana roa sy tapany mahagaga taona. olona: Firy taona ianao? Ianao mijery tahaka ny zazakely. Me: Telo amby roa-polo aho. olona: Ianao dia tanora! Nahoana no amin'izao tontolo izao no hataonao fa? Me: Nahoana no tsy nety I? In 2009, Nanambady aho amin'ny zara raha ara-dalàna, ary zara raha kaja iray taona roa-polo taona. Nandritra ny fiarahana, andraikitra, ary fohy ny fanambadiana, Aho no nanontany ny fotoana sy ny fotoana indray ny fanontaniana toy ny, "Nahoana no hanambady dia tanora? Inona ny zozoro?", sy ny toerana tena manokana, "Tokony ho niandry sy nahafinaritra ny fiainanao!" Ny sasany tamin'ireo olona tatsy mametraka ireo fanontaniana ireo vahiny, fa ny sasany dia family. Nisy adala aho mba hanambady amin'ny toy izany "tanora" taona?...
Rehetra izao, ary avy eo miverina aho ka mihaino ny Albums sy ny hira izay tena nanosika ahy zavakanto sy ara-panahy, raha efa reko izy. Ny iray amin'ireo Albums no The Solus Christus Project amin'ny Shai Linne. Izany dia iray amin'ireo toerana tena atodiakanga hop izahay Albums- fe-potoana. Ny famokarana no tsy manam-paharoa (na dia tsy commerical), ny votoatiny dia mampino, ary ny tonon-Shai fahaiza-manao dia tamin'ny fampisehoana feno. Io dia iray amin'ireo Albums izay mahatonga rappers manontany tena, "Nahoana aho no mbola rapping indray?" Tsy afaka mitanisa ny firaketana an-tsoratra rehetra amin'ity lahatsoratra ity, fa eto ny iray ny toerana tena andininy avy ao amin'ny raki-kira. Izany ny andininy shai amin'ny "Mic Check 1,2": Nomeny ny ainy ho vidim-panavotana, Aho, ary natrehin'ireo mandihy aho, rehefa mitanisa ny hiram Kristy, ny marina Zanak'ondry Izay Manazava ny fanala Iza hafa izao, fa ny Tompo ny firenena jentilisa Afaka saritaka momba ny mamo lava hanoratra tsy misy na dia teny iray ny tena fanomezam-boninahitra? My malemy teny- ho tsy mahay tokoa mba hilazana ny Immaculate Taranaka voatendry hanao asa mahagaga teo amin'ny roa ambin'ny folo taona, efa taloha loha talanjona ny fomba fijery nankatò ny ray aman-dreniny, na dia namorona ny rivotra fantsona ny tena Anomaly- ary iza no misaintsaina ilay Mpanompo ...
Roa herinandro lasa izay no nanala tsirambina ka nitodi-doha ho any am-pitan'ny-tany ny sasany ny toerana tena olona. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, ny fitsidihana mpitantana Steadman, ary dia nitodi-doha ho any Aostralia mba hanompo an'i Jesosy. Inona no nataonay nandritra ny tapa-bolana izahay teo ambanin'ny nandeha alalan'ny Brisbane, Melbourne, Perth, ary Sydney. Ao amin'ny tsirairay tamin'ireo tanàna ireo dia anisan'ny fampisehoana lehibe miainga amin'ny 5,000-10,000 tanora. Talohan'ny ny kaonseritra, izahay nandeha tany ny sasany, ary nanasa azy ireo sekoly any an-mampiseho. Inona izahay ary navela mba hilaza amin'ny maro ny sekoly dia voafetra (satria izy ireo tsy-panjakana kristianina sekoly), fa nanao ny tsara indrindra izahay mba hampahery ny mpianatra sy manoro azy ireo amin'i Kristy. Tamin'ny fampisehoana, dimy izahay rehetra namely ny sehatra toy ny kotaba, unashamed tantsambo. Izahay nanozongozona ireo dingana ho amin'ny tsara indrindra ny fahafahantsika raha miezaka ny ho tahaka ny mazava araka izay azo atao momba ny filazantsara izay manosika antsika hanao izay ataontsika. Mihoatra noho ny zavatra ry namana te mba hahafantatra an'i Jesosy! Miezaka foana izahay mba ho azo antoka miala gaga ry namana, tsy noho ny fahaiza-manao, fa ny Tompo. Inona no niaina tonga izahay ...
Tantaran'ny Filazantsara Coalition Video an'i Eric Mason, Lecrae, ary aho ry namana ary mifanakalo hevitra momba ny mainty “fanavaozana" teolojia
Anarana iombonana amin'ny
Nitsirika kely toeram-ponenana
Ny tena mampalahelo fahamarinana